Ungawususa kanjani umsindo kuvidiyo ku-Mac | Ngivela ku-mac
Uma kuziwa ekwabelaneni ngevidiyo, kuya ngokuqukethwe kwayo, kungenzeka sibe nentshisekelo susa umsindo. Singabona futhi leso sidingo lapho sihlela ividiyo evela ku-Mac yethu ukuze singeze ukukopisha, umculo ongemuva ...
Kungakhathaliseki isizathu ofuna susa umsindo kuvidiyo ku-Mac, kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani. Ukuze senze le nqubo, singasebenzisa kokubili izicelo zamahhala nezikhokhelwayo.
4 Ukusika okuhle
I-iMovie, njengoba nazi nonke, iyona uhlelo lokusebenza lokuhlela ividiyo lwamahhala i-Apple eyenza itholakale kubo bonke abasebenzisi be-iOS kanye ne-macOS. Kufana ne-mini Final Cut Pro, isofthiwe yokuhlela yochwepheshe ye-Apple ebiza ngaphezu kwama-euro angu-300.
Nge-iMovie, asikwazi nje ukudala amavidiyo amahle, sisebenzisa izifanekiso, izinguquko zazo zonke izinhlobo, ukudlala ngengemuva eliluhlaza noma eliluhlaza okwesibhakabhaka ukuze sibuyisele ezinye izithombe, kodwa futhi. kusivumela ukuthi sisuse umsindo kunoma iyiphi ividiyo.
Uma ngaphambilini uke wasebenza nohlelo lokuhlela ividiyo, uzokwazi ukuhlola ukuthi kanjani ukusebenza kwe-iMovie kufana kakhulu, ngemigqa yesikhathi esivumela ukuthi sithole ukuhleleka kwamavidiyo, amathrekhi omsindo adlalwayo ...
Amavidiyo ahlanganisa owawo umsindo afaka phakathi, a umugqa oluhlaza osibonisa izinga lomsindo waleyo threkhi. Ngokuzenzakalelayo, umsindo udlalwa ku-100%, okungukuthi, ngevolumu efanayo njengoba irekhodiwe.
Uma sifuna ukwehlisa ivolumu kufanele beka igundane phezu kwalowo mugqa bese wehlisa uze uthole izinga levolumu elifanele. Kodwa uma esikufunayo kuwukuqeda ngokuphelele, kufanele sehlise lowo mugqa kuze kube yilapho izinga levolumu linguziro.
Uma sesehlise ivolumu yevidiyo noma isiqeshana sevidiyo saya kuqanda, kufanele gcina iphrojekthi futhi sikukhiphele kufomethi esiyifunayo ukuze sabelane ngayo kamuva.
Uma ufuna ukususa umsindo yevidiyo ezoba yingxenye yenye, awudingi ukuyisusa ngokuzimela, njengoba ungakwenza emugqeni wesikhathi waleyo vidiyo, njengoba amathrekhi alalelwayo awo wonke amavidiyo azimele, okungukuthi, singakwazi ukuphakamisa, ukwehlisa noma ukususa umsindo ngokuvumelana nezidingo zethu kuthinta wonke amavidiyo.
Ungakwazi landa iMovie mahhala ngokuphelele ku-macOS ngalesi sixhumanisi.
I-VLC iyisidlali sevidiyo esingcono kakhulu esitholakala emakethe futhi uma ngisho okuhle kakhulu, ngiqonde okuhle kakhulu, hhayi okuhamba phambili. I-interface yayo yakudala eceleni, i-VLC iyinhlangano isidlali esisebenzisanayo nefomethi ngayinye yevidiyo nomsindo emakethe.
Ngaphezu kwalokho, kunjalo umthombo ovulekile, ngakho-ke akudingeki sichithe i-euro eyodwa kulolu hlelo lokusebenza ukuze sifinyelele yonke imisebenzi yayo. Le phrojekthi inakekelwa ngokusekelwe kuminikelo evela kubasebenzisi. futhi iyatholakala kuwo wonke amasistimu wokusebenza ongawacabanga.
I-VLC ayisona nje isidlali sevidiyo esihle kuphela, kodwa futhi ihlanganisa ezinye izici ezengeziwe ezifana nekhono loku landa amavidiyo e-YouTube, vumelanisa umsindo nevidiyo (lapho lokhu kungahambisani) ngisho nokwenzeka susa umsindo kuvidiyo.
para susa umsindo kuvidiyo Ngohlelo lwe-VLC, kufanele senze izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Uma sesivule uhlelo lwe-VLC, kufanele sikhetha ividiyo lapho sifuna ukususa khona umsindo.
Okulandelayo, chofoza ku Amathuluzi - Okuncamelayo.
Esigabeni esithi Izintandokazi, siya ku Audio. Ekhoneni elingezansi kwesokunxele chofoza ku Konke.
Bese kuthi ebhokisini lokusesha sibhale Nika amandla umsindo.
Kukholomu engakwesokudla, asiqoki ibhokisi Nika amandla umsindo.
Ekugcineni, sichofoza inkinobho Gcina ushintsho esilushintshile.
Ungakwazi landa i-vlc mahhala ngokuphelele nge-macOS nge lesi sixhumanisi
Olunye uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile lwamahhala ngokuphelele olusivumela ukuthi senze kanjalo ukusebenza ekuhlelweni kwevidiyo yi-Avidemux, isicelo esisemakethe iminyaka embalwa nokuthi, ngokuqinisekile, uzwile ngaso, okungenani amadala kakhulu, njengoba sasisetshenziswa njalo lapho sinenkinga yokuvumelanisa umsindo nevidiyo.
Kodwa ngaphezu kokusivumela ukuthi sivumelanise umsindo nevidiyo, uhlelo lokusebenza futhi kusivumela ukuthi sisuse ithrekhi yomsindo ngokuphelele kusuka kuvidiyo. Ukususa ithrekhi yomsindo kuvidiyo nge-Avidemux, kufanele senze lezi zinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Okokuqala, sigijima isicelo futhi sivula ividiyo esifuna ukususa kuyo umsindo.
Okulandelayo, kukholamu yesobunxele, esigabeni Ukuphuma komsindo, chofoza imenyu yokudonsela phansi bese ukhetha none (akekho ngesiNgisi).
Ekugcineni, sichofoza ku- Imenyu yefayela bese ukhetha Gcina.
Ungakwazi khipha ku-internet Avidex mahhala ngokuphelele nge-macOS nge lesi sixhumanisi
Njengoba iminyaka idlula, i-iMovie iye yenza ubuncane bezidingo ezandisiwe Ukuze isebenze ku-macOS futhi okwamanje inguqulo esekelwe ephansi kakhulu i-macOS 11.5.1 Big Sur.
Uma iqembu lakho ayihambisani ne-iMovie, futhi ufuna ukuhlela amavidiyo akho ngendlela elula, ngaphezu kokuba nenketho yokususa umsindo kumavidiyo, kufanele uzame i-Cute Cut, uhlelo esingalulanda mahhala ku-Mac App Store nokuthi ayifaki noma yiluphi uhlobo lokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Ukusebenza kwalolu hlelo lokusebenza kuyafana nezinye izinhlelo zokuhlela ividiyo. Ngoba susa umsindo kuvidiyo, kufanele siwufake emugqeni wesikhathi futhi, kukholamu engakwesokudla, esigabeni Somsindo, sehlise ivolumu ibe ncane.
Ukusika okuhle iyahambisana njenge-OX 10.9, inguqulo eyethulwa emakethe ngo-1999, okungukuthi, iyahambisana nanoma iyiphi i-Mac kusukela ngalowo nyaka.
Ungakwazi thwebula Cute Cute mahhala ngokuphelele ku-macOS ngalesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungawususa kanjani umsindo kuvidiyo ku-Mac
I-Apple ivala izitolo eziningi ngenxa yobhubhane